ဇန်နဝါရီ 18, 2016
Fact Check | ပင်စင်စား နိုင်ငံဝန်ထမ်းများ မြေကွက်လျှောက်လို့ရသည် ဆိုသော သတင်းမှား
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေမြေကွက်လျှောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှား Facebook ပါ်မှာ ပြန့်နှံ့နေတဲ့ “ ပင်စင်စား နိုင်ငံဝန်ထမ်းများ မြေကွက်လျှောက်လို့ရ” ဆိုတဲ့ သတင်းဟာ မှန်ကန်မှုမရှိဘဲ ……. အစိုးရအနေနဲ့ ယင်းကိစ္စကို […]
Fact Check | ဗီယက်နမ်မှာ ဆော့ကစားနေတဲ့ မောင်နှမ ၂ ယောက်ပုံကို ၂၀၁၅ နီပေါငလျင်တွင် အသက်ရှင်ကျန်နေသော မောင်နှမ ဆိုပြီး သတင်းမှား
ဒီပုံလေးကို မြင်တဲ့သူအများစုကတော့ ၂၀၁၅တုန်းက လှုတ်ခတ်ခဲ့တဲ့ နီပေါငလျင်က ပုံလေးလို့ သိကြပါလိမ့်မယ်…. ၂၀၁၅ ဧပြီမှာ လှုတ်ခတ်ခဲ့တဲ့ နီပေါငလျင်အပြီး အွန်လိုင်း စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲတဲ့ […]
နိုဝင်ဘာ 26, 2015
Fact Check | ၂၀၁၄ အီကွေဒေါမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ငလျင်ကို “ ကချင်ပြည်နယ်မှာ မြေပြိုသည်” ဆိုသည့်သတင်းမှား
Photoshop ဟုတ်/မဟုတ်စစ်ဆေးပါ ကဲ .. ဒီပုံကိုလည်း ဟုတ်တယ်.. မဟုတ်ဘူး..စဉ်းစားကြည့်ရအောင်..
နိုဝင်ဘာ 17, 2015
Fact Check | ရုရှား မှ ဆီးရီးယား အား တိုက်ခိုက်သည့် Video ကို “ မိုးညင်းဒေသတိုက်ပွဲ” ဆိုသည့် သတင်းမှား
Russia ရဲ့ ဆီးရီးယားကို Clustter Bomb ကျဲတိုက်ခိုက်မှု Video Clip – သတင်းအမှား ……. Russia ရဲ့ ဆီးရီးယာကို […]